Madaxweynaha Sudan oo armay sii daynta haween muaharad loo xidhay | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweynaha Sudan oo armay sii daynta haween muaharad loo xidhay
Madaxweynaha Sudan oo armay sii daynta haween muaharad loo xidhay
Sudan-(Berberanews)-Madaxweynaha Suudaan Omar al-Bashir ayaa amray in la sii daayo dhammaan haweenka mudaaharaadayaasha ah oo la xidhay intii lagu jiray banaanbaxyo caalami ah oo hareeyay xukunka tan iyo bishii December. Bashir ayaa ku dhawaaqay Jimcihii intii uu socday kulan ay la yeesheen koox ka socota bariga Sudan isaga oo degenaa Khartoum.
“Waxaan amar ku bixiyaa Salah Ghosh in ay sii daayaan dhammaan dumarku,” ayuu Bashir u sheegay kulanka, isaga oo ka hadlayay madaxa taliska Sirdoonka Qaranka iyo Adeegga Amniga (NISS) kaas oo horseeday xadhiga dibad baxayaasha.
Xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada ayaa xaqiijiyay tallaabada, oo ku habsatay Maalinta Haweenka Caalamiga ah.
Masuuliyiintu ma aysan sheegin inta haween ah ee la xiray mudaharaadyada, laakiin dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ayaa sheegaya in qiyaastii 150 xabsi ku jiray.
Boqolaal dibadbaxayaal ah, hoggaamiyeyaal mucaarad ah, dhaqdhaqaaqayaal iyo saxafiyiin ayaa la xiray tan iyo markii ay ka soo baxeen dibad-baxyadii 19-kii December kadib markii go’aanka dawladu ay ku kicisay qiimaha rootiga.
Dibad-baxyada ayaa si deg deg ah u socdaalaya banaanbaxyo heer caalami ah oo ka dhan ah xukunka Bashiir, iyada oo dad badani ay ku baaqayaan hoggaamiyaha hoggaamiyihii hore inuu sii wato.
Bashir qudhiisu wuxuu qiray in dibad-baxyada ay hogaamiyeen dhalinyaro, intooda badan dumarka.
Saraakiisha ayaa sheegaya in 31 qof ay ku dhinteen rabshadaha ka dhanka ah mucaaradka illaa iyo hadda, halka Human Rights Watch ay dhimatay dhimashada 51.
Bashiir ayaa ku soo rogay tallaabooyin adag oo ay ka mid yihiin xaalad deg deg ah oo waddanka oo dhan ah oo sanadka oo dhan ah, si looga hortago dibad baxyada ka dib markii bilaysku bilowday in uu xakameeyo dhaqdhaqaaqa.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo meeqaamkii u sarreeyay lagu soo dhaweeyay dalka Imaaraadka-Sawirro
Next article149 rakaab ah oo ku naf waayay diyaarad Itoobiya leedahay oo ku burburtay meel u dhow Addis Ababa